ठूलो जनसमर्थनसहित बनेको यो सरकारको आलोचना किन भइरहेको होला ? सरकारले कतिपय काम बजेटमार्फत ल्याउँछ या नीति तथा कार्यक्रममार्फत ल्याउँछ । कतिपय निर्णयमार्फत पनि ल्याउँछ । र, कतिपय ‘अनगोइङ प्रोग्राम’हरूलाई सरकारले संशोधन तथा थपघट गरेर पनि अगाडि बढाउने काम गर्छ । यसपालि गत जेठ १५ मा बजेट आयो । हामी मंसिरको २३ गते यो कुराकानी गरिरहेका छौँ । यसअवधिमा सरकारका केही प्रयास राम्रा देखिन्छन् ।… विस्तृत समाचार
१० वर्षको अन्तरालमा तपाईं तेस्रोपटक पार्टी एकतामा निर्णायक भूमिकामा देखिनुभयो । एकता केन्द्र हुँदै नेकपा माओवादी केन्द्रसँग जोडिएका सबै परिचय अब इतिहास बने । कस्तो लाग्दो रहेछ बारम्बार परिचय फेरिँदा ? कम्युनिष्ट भनेका गतिशील क्रान्तिकारी हुन् । त्यसकारण तत्कालीन परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर नै हामीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । र, हरेक पटकका निर्णयले तत्कालीक परिस्थितिको सन्दर्भमा सही निर्णय नै गरेको पुष्टि गरेको छ । हामीले… विस्तृत समाचार
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नौ महिना पूरा गरेको छ । सरकारको कामकारबाहीको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ? अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र म नेकपा एमाले बनेपछि १७, १८ वर्ष एउटै कमिटीमा बसेर काम ग¥यौँ । आर्थिक मामिलामा एमालेको चिन्तन के हो ? जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई कसरी आर्थिक नीतिमा लागू गराउने हो ? कम्युनिष्ट पार्टी, नेता र कार्यकर्ताका आर्थिक आचरण कस्तो हुनुपर्छ भन्ने… विस्तृत समाचार
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा यहाँको पार्टी पनि सहभागी छ । यो सरकारका प्राथमिकता र कार्यशैलीलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? सरकारले बाहिर जुन ढंगले नयाँ कार्यक्रम, कार्यदिशा अगाडि सारेको छ, त्यो हेर्दा अब नेपाल नयाँ फड्को मारेर जान्छ कि भन्ने ‘इम्प्रेसन’ जनतालाई दिएको देखिन्छ । तर, काम गराई हेर्ने हो भने पुरानै परम्परा, पुरानै सत्ता जस्तो पञ्चायतीदेखि बहुदलीय व्यवस्थाका बेलामा जस्तै कृयाकलाप नै… विस्तृत समाचार
नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबी विमानको विषयलाई केहीले विवादमा तान्ने प्रयास गरेका छन् । तर, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार भने निगमविरोधी तत्वहरु निगम डुबाउन खेलमा अफवाह फैलाइरहेको बताउँछन् । उनीहरुसँगको कुराकानी– वाइडबडी विमान खरिदमा यत्रो विवाद किन ? मिडियामा आएको समाचार पढेर हामी निगम कर्मचारीहरु पनि छक्क परिरहेका छौं, किनकि यति ठूलो योजना प्रचलित ऐन विनियम हुबहु पालना गरेर फष्ट क्लासको ग्लोबल टेण्डर प्रक्रियाबाट… विस्तृत समाचार
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि यहाँलगायत नेता–कार्यकर्ताको परिचय फेरियो । कस्तो अनुभव हुँदोरहेछ ? मूलतः कम्युनिष्ट पार्टी एउटा निश्चित विचारबाट निर्देशित हुन्छ । पार्टीका नाम भनेका तत्कालीन हुन्छन् । यद्यपि, त्यसको ऐतिहासिक महत्व, भूमिका, प्रसंग, परिचय सबै हुन्छ । सार पक्ष, श्रमजीवी जनताको पक्षमा काम गर्ने बलियो कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्नु नै हो । दुवै पार्टीले त्यो अभिभारा नयाँ पार्टीमा रुपान्तरण भएर अहिले… विस्तृत समाचार
यहाँहरूलाई सत्तापक्ष भनौँ कि प्रतिपक्ष ? हाम्रा माग पूरा गर्ने समझदारी साथ यो सरकारलाई हामीले समर्थन दिएका हौँ । त्यो फिर्ता लिएका छैनौँ । तर, हामी सरकारमा सामेल भने छैनौँ । यसर्थ, संसद्भित्र प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्दै आएका छौँ । प्रतिपक्षकै भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ । त्यसैले प्रतिपक्ष नै भन्दा हुन्छ । यहाँहरूले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारसँग संविधान संशोधनका निम्ति समझदारी गरेका छौँ भन्दै आउनुभएको… विस्तृत समाचार
बिमा क्षेत्रमा सुपरिचित नाम हो बिजयबहादुर शाह । लामो समय एनएलजी इन्स्योरेन्समा सिइओका रुपमा काम गरेर पहिचान बनाएका उनी हाल नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको सिइओका रुपमा काम गरिरहेका छन् । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको बिमा क्षेत्रमा पहिलो कम्पनीका रुपमा छुट्ट्रै सान छ । २००४ सालमा नेपाल बैंकको अगुवाइमा यो कम्पनीको स्थापना भएको हो । त्यही कम्पनीलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने प्रणसहित शाहले केही महिनायता कम्पनीको व्यवस्थापिकय नेतृत्व सम्हाल्दै… विस्तृत समाचार
केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री नेपाल चौथो संविधानधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी सञ्चार माध्यम राससलाई समसामयीक विषयमा अन्तर्वार्ता दिएका छन् । उक्त अन्तर्वार्ता सान्दर्भिक ठानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, चौथो संविधान दिवस पनि आयो । यस सन्दर्भमा देशवासीसमक्ष के भन्न चाहनुहुन्छ ? यस संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा देशभित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु… विस्तृत समाचार
११ वर्षअघि नै एड्भरटाइजिङ एशोसियसन अफ नेपाल(आन) को अध्यक्षमा उनले दाबी थियो । तर, रविन्द्र रिजाल ‘शशी’ लाई नेतृत्व दिन धेरै तयार भएनन् । त्यतीबेला नै उनीसँग आनको नेतृत्वमा बसेर विज्ञापन क्षेत्रलाई केही योगदान दिने सपना थियो । त्यसका लागि चार वर्षअघि पनि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरे । तर, पराजित भए । सधै सिधा बाट्ने हिड्ने र चुनावमा अनेक चलखेल गर्न नसक्ने भएकाले आफू पराजित भएको… विस्तृत समाचार